Muxuu iPad-ku u lahayn kalkuleytar? | Wararka IPhone
Luis Padilla | | iPad, dhowr
Waa mid ka mid ah su'aalaha uu adeegsade kasta oo iPad-ka ahi mar uun weydiiyo, ama marar badan. Muxuu kiniinka Apple uunan haysan kalkuleytar marka ay iPhone horay ugu rakibtay nidaamka? Haa, waa run in aan weydiisan karno Siri, iyo in aan ku hayno boqolaal codsi App Store, qaar iyaga ka mid ah oo bilaash ah, oo si fiican u beddeli kara maqnaanshaha kalkuleytarka ku jira iPad-ka, laakiin weli waa la yaab leh in Apple ay go'aansatay inay ku sameyso iyada oo aan codsi ku jirin iPad-keeda, marka ay faa'iido weyn u yeelan karto iyada oo la tixgelinayo in waxbarashada iyo ganacsigu ay yihiin laba qaybood oo waaweyn oo loogu talagalay Ipadka. Hagaag jawaabta ayaa ah in wax walba ay sabab u yihiin Steve Jobs iyo rabitaankiisa ugu sarreynta.
Sida laga soo xigtay Cult of Mac, shaqaale hore oo shirkad ah ayaa xaqiijiyay in go'aanka ah in aan lagu sameyn barnaamijka 'Calculator' ee iPad-ka uu si toos ah u qaatay Steve Jobs. Waana sababta oo ah intii lagu jiray tijaabooyinka noocyada ugu horreeya ee kiniiniga waxaa jiray codsi Calculator ah, laakiin asal ahaan wuxuu ka weynaaday codsiga iPhone si uu ugu habboonaado shaashadda iPad-ka. Markay wax walba diyaar ahaayeen, Shaqooyinku waxay weydiisteen Scott Forstall inuu abuuro codsi, marka lagu daro la qabsiga cabbirka shaashadda cusub, naqshad si gaar ah loo qaabeeyey si looga faa'iideysto cabbirka aaladda cusub. Markii Steve Jobs uu arkay in Forstall uu iska indhatiray codsiguna uu la mid yahay sidii noocyadii ugu horreeyay, madaxa Apple wuxuu qaatay go'aanka ah inuu ka saaro iPad-ka.
Scott Forstall wuxuu ka mid ahaa hawl wadeenada shirkada ugu shaqada dheeraa Steve Jobs, ilaa dhamaadkii 2012 Tim Cook "wuu ku qasbay inuu ka baxo" Maasiyada fiasco awgeed. Ilaa iyo markaa madaxa horumarinta macruufka ayaa diiday inuu la saxeexo Tim Cook warqadda raaligelinta dhibaatooyinka Khariidaduhu ku bilaabeen iOS 6., oo kaliya saxiixa Cook ayaa ka muuqday dukumintigaas. Waxaa lagu ilaaliyay ugu badnaan Steve Jobs, sida sheekadani u muuqato inay xaqiijinayso, dhimashadii aasaasihii shirkadda Apple ka dib, wuxuu lumiyay mudnaantii uu u lahaa jihada cusub ee Tim Cook.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Muxuu iPad-ku u lahayn kalkuleytar?
Hadda waxay ahayd markii aan u imid inaan taas ogaado.
Sidoo kale barnaamijka cimilada ayaa soo baxa iyo qaar kale oo aanan hadda xasuusan
Haddaba, ku dheji
Ku jawaab unargencol
Waxa aniga doqon iila muuqda ayaa ah in TV-ga cusub ee Apple uusan ahayn dalabka MAPS sidoo kale!
Carlos ayaa yiri dijo
waayo-aragnimo in halkan aad ipad
Ku jawaab carlos ayaa yidhi